१५ औं पञ्चवर्षीय योजना नवधनाढ्य जन्माउने पुलिन्दा नबनोस् - Jhilko
१५ औं पञ्चवर्षीय योजना नवधनाढ्य जन्माउने पुलिन्दा नबनोस्
काठमाडौं । सरकारले दीर्घकालीन सोचसहितको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रुप दिँदैछ । विभिन्न चरणमा गरिएका छलफलका आधारमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी पाँच वर्षका लागि विकासका योजना तयार गरेको हो । केही दिनभित्र नै मन्त्रिपरिषद्ले पाँच वर्षमा हासिल गरिने लक्ष्यसहितको एक थान योजना पारित गर्नेछ ।
नेपालमा विकास योजनाका सन्दर्भ केलाउँदा विसं १९९० सालको महाभूकम्पदेखि नीतिगत अवधारणा सुरु भएको पाइन्छ । त्यतिबेला कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरण गर्न भनेर उद्योग परिषद्को स्थापना भएको थियो । विसं १९९२÷९३ मा २० वर्षीय योजना तर्जुमा गरिएको थियो भने विसं २००६ मा १५ वर्षीय योजना तयार गर्न राष्ट्रिय योजना समितिको गठन गरिएको थियो ।
विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भारतबाट विज्ञ झिकाएर योजना र विकास मन्त्रालयको गठन गरिएको थियो । यिनै पृष्ठभूमिका आधारमा विसं २०१३ सालमा प्रथम योजना लागू गरियो भने राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना समेत गरियो । कार्यान्वयनको पाटो जे भए पनि नीतिगत रुपमा योजनाबद्ध विकासक्रमको प्रारम्भिक चरण यो नै हो ।
निरन्तरको राजनीतिक संघर्षपछि संघीयता संरचनासहितको नयाँ संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनले नेपालमा कम्युनिस्टले स्पष्ट बहुमत पाए । दुई तिहाई बहुमतको सरकार पनि गठन भयो । निर्वाचनमा जाँदा कम्युनिस्टले प्रस्तुत गरेका लक्ष्य तथा योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र राज्यको नीतिमा समावेश गर्ने समय अब आएको छ ।
जनतासमक्ष प्रस्तुत गरिएका सपना वा लक्ष्य कत्तिको विश्वसनीय थिए भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्ने यही समय हो । बहस जे जति भए पनि र जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन हुन्छ नै । यो आर्थिक वर्ष सकिए लगतै सरकारले पाँच वर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्दैछ ।
त्यहाँ खोजिनेछ, जनताप्रतिको इमान्दारिता । विगतको नियति एवम् सरकारको वर्तमान क्रियाकलाप र राज्य संरचनामा रहेका नेतृत्वले प्रवाह गर्ने धारणा विश्लेषण गर्ने हो, लागू हुने संघारमा रहेको यो अर्थराजनीतिक दस्तावेजले जनताका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ला भनेर विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।
यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पाँच वर्षभित्र करिब रु. ९८ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने अनुमानसहितको योजना बनाएको बुझिएको छ ।
दीर्घकालीन सोचसहितको १५ औँ पञ्चवर्षीय (आर्थिक वर्ष २०७६ र २०७७ देखि २०८० र २०८१) योजनाको मस्यौदा अन्तिम रुप दिएको बताएको छ । उक्त लगानीबाट पाँच वर्षभित्र औसत १०.१ प्रतिशतसम्मको वृद्धिदर हुने आयोगको लक्ष्य छ ।
आधार पत्रमा हालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलब ९ प्रतिशत उल्लेख छ । २८ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीको दरलाई पाँच वर्षमा १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै ११ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको बेरोजगारको दरलाई विसं २०८१ सम्म ४ प्रतिशतमा झारिने, १ हजार ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादनलाई ५ हजार मेगावाट पु¥याउनेजस्ता ३३ वटा सूचकहरुको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
पाँच वर्षभित्र कृषि क्षेत्रमा रु. आठ खर्ब ३७ अर्ब ३० करोड लगानी गरेर यस क्षेत्रको औसत बृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रमा हुने रु. ३५ खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड लगानीबाट १७.१ प्रतिशत बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रु ५३ खर्ब ५६ अर्ब ९७ करोड लगानी हुने र औसत ९.९ प्रतिशत बृद्धिदर हुने अनुमान छ ।
यी सबै लक्ष्य अधिकतम् हो । कूल लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३७.६ प्रतिशत अर्थात् रु. ३६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड हुने अनुमान छ । निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै रु. ५६ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड लगानी हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । यो कूल लगानीको ५८.१ प्रतिशत हुनेछ । सहकारी क्षेत्रबाट रु. चार खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड लगानी हुने आयोगको अनुमान छ ।
यो सबै लगानीबाट पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्षसम्म पुग्दा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घटेर २१.९ प्रतिशत पुग्नेछ । उद्योग क्षेत्रको हिस्सा भने बढेर २०.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सबैभन्दा बढी हिस्सा सेवा क्षेत्रको हुनेछ । योजना सकिंदासम्म सेवा क्षेत्रको कूल अर्थतन्त्रमा हिस्सा ५७.४ प्रतिशत पुग्नेछ ।
आयोगले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनासहित २५ वर्षे दीर्घकालीन योजनासमेत तयार गरेको जनाएको छ । उच्च आर्थिक बृद्धिसहित अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने भन्दै २५ वर्षपछि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको विनिमय दर अनुसार औसत १४ लाख रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । १९औँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म पुग्दा यो लक्ष्य हासिल हुने अनुमान छ ।
वि.सं. २०१३ नौवटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । ती योजना अनुसारभन्दा पनि विश्वव्यापीकरणका आधारमा नेपालको विकास धकेलिएका छन् । आगामी दिनमा पनि विश्वमा आउने परिवर्तनले जसरी घच्घच्याउँछ त्यसैगरी नै देश चल्ने हो कि भन्ने आशङ्का सबैमा छ ।
सत्तामा पुगेपछि राज्यस्रोतलाई दोहन गरेर नवधनाढ्यले जन्म लिने विगतको इतिहासले अब निरन्तरता पाउँदैन भन्न सकिन्न । कुशासन एवम् भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारीतन्त्रसँग घाँटी जोडेर राजनीतिक नेतृत्व पनि फस्दै आएको छ । त्यस्ता गतिविधिबाट माथि उठेर जनतामा समर्पित हुन सकेमात्र योजनाको अर्थ हुनेछ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना नवधनाढ्य जन्माउने पुलिन्दा नबनोस्, समावेशी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्ने जनताको दस्तावेज बनोस् । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
ट्याक्सी चढेर बाहिरिए निवर्तमान मन्त्री गोकर्ण विष्ट
बाहिर सडकमा सार्वजनिक ट्याक्सी (भाडाको) चढेर उनी सामाखुशीस्थित् आफ्नो निजी निवास...
हेलिकप्टरमार्फत सुत्केरीको उद्धार, नोबेल अस्पतालमा उपचार...
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ‘दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका...